BPS/DegmadaK1 - 8aad
Sabab ka xariirta caqabadaha ka yimid masiibada ee saameeyay xog ururinta 2020 iyo 2021,
qaybtaan waxa uu ka tarjumayaa xogta/qiimaynta tayada dugsiga ee xiliga Dayrta 2019.
Xiliga Biloowga/Dhamaadka 8:30am-2:30pm
Dugsiga Kadib 2:30pm-6:00pm
Lambarka Taleefanka 617-635-8169
Diiwaangalinta dugsigaan katirsan Boston Public School (BPS) waxaa lagu go'aanshaa hanaan bakhtiya nasiib ah oo kusalaysan ciwaanka gurigga aad dagantahay.. Dhagsii Batoonka Register Now si aad uhubiso in diiwaangalintu furantahay.
Xiliga Kama danbaysta ah ee Diiwanagalinta Muhiimada lasiinaayo ee fasalada K0, K1, 6aad, 7aad iyo 9aad
Janaayo 28, 2022
Xiliga Diiwaangalinta Muhiimka ah ee fasalka K2 iyo fasalada kale
Waxyaabaha ku saabsan Dugsiga
"Goob arday kasta lagu dhiiri galiyo si uu guul uga gaaro meesha ugu saraysa ee hamigiisa." Dugsigeenu wuxuu kudhisanyahay saddex tiir: sinaan, wada shaqayn, iyo bulsho. Sinaanta: casharadeenu waa kuwo iskudhafan, gaar ah, kuna dhisan awoodaha iyo baahiyaha kaladuwan ee ardayda. Wada shaqaynta: cunug kasta waxaa lagu dhiiri galiyaa inuu wax kubarto khibrado laxasuusan karo iyo inay kuxirnaadaan bulshadeena. Bulshada: caruurta iyo qoysaskooda waa lakalsooni galiyaa, laqadariyaa waana lala shaqeeyaa.
Hormarka Isku Babac dhiga ah ee Dugsiga
Sidee dugsigaan loogu barbardhigi karaa waxyaabaha soo socda?
Waxqabad ka wanaagsan kan celceliska BPS ee degmada
Waxqabad ka liita kan celceliska gobolka
Wax qabad ka liita kan celceliska BPS ee degmada
Imisa arday ayaa ka gudubtay MCAS?
Xogta Deegaanka iyo Kala duwanaanshaha
Kala duwanaanshiyaha Shaqaalaha
Oo lagu siinaayo fasalada K-5 si bilaash ah. Barnaamijka jirdhiska BOKS ee fasalada 6-8.
Barnaamijka Dugsiga Kadib ee Haley/YMCA oo socda ilaa 6:00 p.m.:
Yunifoomka Qasabka ah ee Dugsiga Haley
Waxbarashada Caruurta Yaryar oo iskudhafan
Iskudhafka Heerka sare ee Baahida
Kasoo baxay Dugsiga